RASMI: Kooxda Juventus oo ku dhawaaqday saxiixa Medhi Benatia – Gool FM
Haaruun July 15, 2016
(Turin) 15 Luuliyo 2016 – Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa ku dhawaaqday inay heshiis amaah ah Bayern Munich kaga soo qaadatay Medhi Benatia, waxaana kooxda ka dhisan Turin ay dooq u haystaa inay heshiiskaas ka dhigto mid joogto 2017.
29-sano jirkaan xulka qaranka Morocco ayaa dib ugu soo laabtay horyaalka Serie A, kaddib labo sanadood oo uu ku soo qaatay garoonka Allianz Arena.
Difaacii hore ee kooxda Roma ayaa sanadka soo socda ku qaadan doona Turin, kaddib markii kooxda Juve ay heshiiskiisa amaahda ah ku bixisay 3 milyan oo euro.
Haddii ay kooxda Juve doonayso in xiddigan heshiiskiisa ay ka dhigto mid joogto ah oo ay toos u wada qaadato waxa ay ku qasban yihiin inay bixiyaan 17 milyan oo euro bisha May ee soo aaddan.
Benatia ayaan shisheeye ka ahayn horyaalka Serie A, isagoo afar sanadood ku qaatay Talyaaniga gaar ahaan kooxaha Udinese iyo Roma.
Xiddiga xulka qaranka Morocco ayaa labo xilli ciyaareed ku soo qaatay kooxda Bayern Munich, waxaana ay kula saxiixdeen 26 milyan oo euro bishii August sanadkii 2014-kii.
Waxa uu Benatia 46 kulan ka hoos ciyaaray Pep Guardiola, isagoo dhaliyey saddex gool.
Benatia ayaa noqonaya saxiixii saddexaad oo ay samayso kooxda Juventus inta uu furan yahay suuqan kala iibsiga ciyaartoyda, kaddib markii ay horay u xaqiijiyeen saxiixyada Dani Alves oo uga yimid Barcelona iyo xiddigii khadka dhexe ee kooxda Roma Miralem Pjanic.
Gobolka Banaadir oo dhib la'aan uga badiyay Koonfur Galbeed
Samuel Eto'o: "Xidiga garoonka Messi iyo hazard ma noqon doonaan waxaa noqon doona Madaxweyne Erdoğan"